လက်သည်းနီနဲ့ ပြုလုပ်လို့ရတဲ့အရာ (၅) မျိုး – Lifestyle – Duwun
လက်သည်းနီနဲ့ ပြုလုပ်လို့ရတဲ့အရာ (၅) မျိုး
အလှအပအတွက် မဟုတ်ဘဲ တခြားနည်းတွေမှာ သုံးပါမယ်။
Felicity 2017-04-30 12:35:44.0, 2017-04-30 12:35:44.0
ဝယ်တုန်းကဝယ်ပြီးမှ မသုံးဖြစ်လို့ ချောင်ထိုးထားရတဲ့ လက်သည်းနီပုလင်းတွေ ရှိနေလား? သူများကို ပေးပစ်လိုက်လေ။ မပေးချင်ဘူးဆိုလည်း အိမ်မှာသုံးလို့ရတဲ့နေရာတွေမှာ သုံးတာပေါ့။ လက်သည်း၊ ခြေသည်းမှာ ဆိုးတာမဟုတ်ဘဲ တခြားနေရာတွေမှာ သုံးလို့ရပါသေးတယ်။
အရေးအကြောင်းဆို ဘယ်သော့နဲ့ ဘယ်သော့ခလောက်ကို ဖွင့်ရမှန်းမသိဘူး။ တစ်ခုပြီးတစ်ခု ထိုးထည့်နေရတာ သိပ်မဟုတ်သေးပါဘူး။ ဒါဆိုရင် သော့ချောင်းတွေကို လက်သည်းနီအရောင်နဲ့ ခွဲပြီး မှတ်ထားလိုက်လေ။
၂။ စာအိတ်တွေကို ချိပ်ပိတ်မယ်
စာအိတ်ကို ချိတ်ပိတ်ဖို့ ကော်မရှိဘူးလား? လက်သည်းနီနဲ့ပိတ်လိုက်လေ။ ပိုတောင် ခိုင်ခံ့ပါသေးတယ်။
ကွန်ပျူတာ USB အပေါက်မှာထိုးရတဲ့ gadget လေးတွေက အရမ်းသေးနေရင် ဘယ်ဘက်ကိုထိုးရမယ်ဆိုတာ မသိရဘူး။ တစ်ဖက်နဲ့အဆင်မပြေမှ နောက်တစ်ဖက်ကို လှည့်ပြီးထိုးသွင်းရတယ်။ ဒါဆိုရင် တစ်ခါတည်း လက်သည်းနီလေးနဲ့ အစက်ချပြီးတော့ မှတ်ထားလိုက်တာ ကောင်းပါတယ်။ အလုပ်ရှုပ်သက်သာတာပေါ့။
လျှပ်စစ်မီးမရတဲ့ တောတောင်တွေ၊ နယ်ဘက်တွေကို ခရီးသွားတဲ့အခါ အိတ်ထဲမှာ ယမ်းမီးခြစ်လေးတော့ ဆောင်သွားသင့်ပါတယ်။ အရေးအကြောင်းဆို သုံးလို့ရတာပေါ့။ မီးခြစ်ဆံတွေ ရေစိုလို့ အသုံးပြုမရတော့တာမျိုး မဖြစ်အောင် မီးခြစ်ဆံခေါင်း ထိပ်လေးတွေကို လက်သည်းနီပုလင်းထဲကို နှစ်ထားလိုက်ပါ။ ရေမစိုတော့ဘူး။ တကယ်သုံးချင်လာတော့မှ စက္ကူလေးနဲ့သုတ်ပြီးဖယ်ရှားလိုက်ရုံပါပဲ။
ကိုယ်နဲ့အတူနေတဲ့လူက ကိုယ့်လိုမျိုး ပစ္စည်းတစ်ခုခု ဆင်တူရှိနေပြီဆို သူ့ပစ္စည်း၊ ကိုယ့်ပစ္စည်း ခွဲထားလို့ရအောင် ပစ္စည်းပေါ်မှာ လက်သည်းနီသုတ်ပြီး မှတ်ထားလိုက်လို့လည်း ရသေးတယ်။
Source : Wearex